Politika fiarovana fiainan'olona - Sorrento Therapeutics
Daty manankery: 14 Jona 2021
Ity Politika momba ny fiainana manokana ity (“politika fiarovana fiainan'olona”) manazava ny fomba Sorrento Therapeutics, Inc. sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy ary ny sampana (miara-mientana, "Sorrento, ""us, ""we, "Na"ny”) manangona, mampiasa, ary mizara ny mombamomba anao manokana mifandraika amin'ny tranokala, fampiharana ary vavahadin-tserasera izay misy rohy mankany amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity (miaraka amin'ny "Site”), ny pejin'ny media sosialy, ary ny fifandraisantsika amin'ny mailaka (miaraka amin'ny Site, ny “Service").
Ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia tsy voatery mihatra amin'ny mombamomba anao manokana izay nomenao na homenao anay amin'ny toe-javatra hafa ankoatra ny amin'ny alàlan'ny tranokala. Ny politikan'ny fiainana manokana misaraka na fanampiny dia mety mihatra amin'ny mombamomba manokana izay nangonin'i Sorrento, toy ny mifandraika amin'ny fitsapana klinika, serivisy laboratoara marary, na vokatra COVISTIX. Sorrento dia manana zo, amin'ny fotoana rehetra, hanova ity Politika momba ny fiainana manokana ity. Raha manao fanitsiana izay manova ny fomba fanangonana, fampiasana, na fizarana ny mombamomba ny tena manokana izahay, dia handefa ireo fanovana ireo ao anatin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity. Tokony hojerenao tsindraindray ity Politika momba ny fiainana manokana ity mba hanarahanao ny vaovao farany momba ny politika sy ny fomba fanaontsika ankehitriny. Homarihinay ny daty manan-kery amin'ny kinova farany amin'ny Politika momba ny fiainana manokana eo an-tampon'ity Politika momba ny fiainana manokana ity. Ny fampiasanao hatrany ny Serivisy aorian'ny famoahana ny fanovana dia ny fanekenao ny fanovana toy izany.
FIVORIANA NY FANDAHARAN'I PAOLY
Ny mombamomba anao manokana omenao. Mety hanangona ireto fampahalalana manokana ireto izay omenao amin'ny alàlan'ny Serivisy izahay na amin'ny fomba hafa:
Antsipiriany ifandraisana, toy ny anarana, adiresy mailaka, adiresy mailaka, laharan-telefaona ary toerana.
Fampahalalana matihanina, toy ny lohatenin'ny asa, ny fandaminana, ny laharan'ny NPI, na ny sehatry ny fahaizana.
Fampahalalana momba ny kaonty, toy ny solon'anarana sy tenimiafina noforoninao raha miditra amin'ny vavahadin-tseraseray ianao, miaraka amin'ireo angona fisoratana anarana hafa.
safidinao, toy ny safidinao ara-barotra na fifandraisana.
Communications, ao anatin'izany ny fampahalalana mifandraika amin'ny fanontanianao aminay sy izay hevitra omenao rehefa mifandray aminay ianao.
Fampahalalana ny fangatahana, toy ny resume, CV, tombontsoa amin'ny asa, ary fampahalalana hafa azonao omena rehefa mangataka asa na fahafahana miaraka aminay na mangataka fampahalalana momba ny asa amin'ny alàlan'ny serivisy.
Fampahalalana hafa izay nofidianao homena fa tsy voatanisa manokana eto, izay hampiasainay araka ny voalaza ato amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity na izay nambara tamin'ny fotoana fanangonana.
Ny mombamomba manokana voaangona ho azy. Izahay, ireo mpanome tolotra anay ary ireo mpiara-miombon'antoka aminay dia afaka manoratra ho azy ny mombamomba anao, ny solosainao, na ny findainao ary ny asanao rehefa mandeha ny fotoana ao amin'ny Serivisy sy ny tranokala hafa ary ny serivisy an-tserasera, toy ny:
Fampahafantarana hetsika an-tserasera, toy ny tranokala notsidihinao talohan'ny nitetezanao ny Serivisy, pejy na efijery nijerenao, hafiriana nolanianao tamin'ny pejy na efijery, lalan'ny fitetezana eo anelanelan'ny pejy na efijery, fampahalalana momba ny hetsika ataonao amin'ny pejy na efijery, fotoana fidirana, ary faharetan'ny fidirana.
Fampahalalana momba ny fitaovana, toy ny karazana rafitra fiasan'ny solosainao na fitaovana finday sy laharan'ny dikan-teny, mpitatitra tsy misy tariby, mpanamboatra sy maodely, karazana navigateur, famaha ny efijery, adiresy IP, famantarana tokana, ary fampahafantarana toerana ankapobeny toy ny tanàna, fanjakana, na faritra ara-jeografika.
Cookies sy ny teknolojia mitovy. Tahaka ny serivisy an-tserasera maro, mampiasa cookies sy teknolojia mitovy amin'izany izahay mba hanamora ny fanangonam-baovao mandeha ho azy, ao anatin'izany:
Cookies, izay rakitra an-tsoratra izay tahirizin'ny vohikala amin'ny fitaovan'ny mpitsidika iray mba hamantarana manokana ny mpitety tranonkalan'ny mpitsidika na hitahiry vaovao na fanovana ao amin'ny navigateur mba hanampiana anao hivezivezy eo anelanelan'ny pejy amim-pahombiazana, hitadidy ny safidinao, hanamora ny fiasa, hanampy anay hahatakatra ny asan'ny mpampiasa. sy lamina, ary manamora ny dokam-barotra an-tserasera. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho azafady ny anay Politika cookie.
Web beacons, fantatra ihany koa amin'ny hoe tag pixel na GIF mazava, izay matetika ampiasaina hanehoana fa nisy pejy web na mailaka nidirana na nosokafana, na nisy votoaty nojerena na kitihina, matetika mba hanangonana antontan'isa momba ny fampiasana tranokala sy ny fahombiazan'ny fanentanana ara-barotra.
Ny mombamomba manokana azo avy amin'ny antoko fahatelo. Mety hahazo fampahalalana manokana momba anao avy amin'ny antoko fahatelo ihany koa izahay, toy ny mpiara-miasa aminay, mpanjifa, mpivarotra, sampana ary mpiara-miasa, mpanome data, mpiara-miombon'antoka ara-barotra, ary loharano azo ampahibemaso, toy ny sehatra media sosialy.
anarana. Ireo mpampiasa ny serivisy dia mety hanana fahafahana hiantso ny mpiara-miasa na ny fifandraisana hafa aminay ary mizara ny mombamomba azy ireo. Aza omena anay ny mombamomba ny olona iray raha tsy mahazo alalana hanao izany ianao.
Fampahalalana manokana momba ny tena manokana. Raha tsy hoe angatahanay manokana izany, dia mangataka izahay mba tsy hanome anay mombamomba saro-pady (ohatra, fampahalalana mifandraika amin'ny fiaviana ara-poko na ara-poko, hevitra ara-politika, fivavahana na finoana hafa, fahasalamana, biometrika na toetran'ny fototarazo, fiaviana heloka bevava na mpikambana sendikaly. ) amin'ny alàlan'ny serivisy, na aminay.
FAMPIASANA NY FAHASALAMANA
Afaka mampiasa ny mombamomba anao manokana izahay ho an'ireto tanjona manaraka ireto sy araka ny voalaza etsy ambony na ato amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity na amin'ny fotoana fanangonana.
Hanome serivisy. Mety hampiasa ny mombamomba anao izahay mba:
manome sy miasa ny Serivisy sy ny orinasanay;
manara-maso sy manatsara ny traikefanao amin'ny serivisy;
mamorona sy mitazona ny kaontinao amin'ny fampiharana na vavahadin-tserasera;
avereno jerena sy valio ny fangatahanao na fanontanianao;
mifandray aminao momba ny serivisy sy ny fifandraisana hafa mifandraika amin'izany; SY
manome fitaovana, vokatra ary serivisy angatahinao.
Fikarohana sy fampandrosoana. Mety hampiasa ny mombamomba anao izahay ho an'ny tanjona fikarohana sy fampandrosoana, ao anatin'izany ny fanatsarana ny Serivisy, ny fahazoana sy ny famakafakana ny fironana sy ny safidin'ny mpampiasa anay, ary ny famolavolana endri-javatra vaovao, fiasa ary serivisy. Ao anatin'ireo hetsika ireo dia mety hamorona angon-drakitra mitambatra, tsy fantatra, na tsy fantatra anarana hafa avy amin'ny mombamomba manokana voaangonay izahay. Ataonay ho angona tsy mitonona anarana ny mombamomba ny tenanay amin'ny alalan'ny fanesorana ny vaovao izay mahatonga ny angon-drakitra ho famantarana anao manokana. Azontsika ampiasaina io angona tsy fantatra anarana io ary zarainay amin'ny antoko fahatelo ho an'ny tanjona ara-barotra ara-dalàna, ao anatin'izany ny famakafakana sy fanatsarana ny Serivisy ary ny fampiroboroboana ny orinasanay.
Ny varotra mivantana. Azonay alefa aminao ny fifandraisana ara-barotra mivantana mifandraika amin'ny Sorrento na hafa ara-barotra araka ny navelan'ny lalàna. Azonao atao ny miala amin'ny fifandraisanay ara-barotra araka ny voalaza ao amin'ny fizarana "Ny safidinao" etsy ambany.
Dokam-barotra mifototra amin'ny fahalianana. Mety hiara-miasa amin'ny orinasa mpanao dokam-barotra an'ny antoko fahatelo sy orinasa media sosialy izahay mba hanampy anay hanao dokam-barotra amin'ny orinasanay sy hampiseho doka amin'ny Serivisy sy tranokala hafa. Ireo orinasa ireo dia mety mampiasa cookies sy teknolojia mitovy amin'izany mba hanangonana vaovao momba anao (anisan'izany ny angon-drakitra momba ny fitaovana sy ny angon-drakitra momba ny hetsika an-tserasera voalaza etsy ambony) rehefa mandeha ny fotoana manerana ny Serivisy sy tranokala ary serivisy hafa na ny fifandraisanao amin'ny mailakay, ary mampiasa izany fampahalalana izany mba handefasana doka izay heveriny fa hahaliana anao. Afaka mianatra bebe kokoa momba ny safidinao ianao amin'ny famerana ny dokam-barotra mifototra amin'ny fahalianana ao amin'ny fizarana "Ny safidinao" etsy ambany.
Fangatahana fandraisana mpiasa sy fanodinana. Mifandray amin'ny hetsika fandraisana mpiasa na ny fangatahanao na ny fanontanianao momba ny asa miaraka amin'i Sorrento amin'ny alàlan'ny serivisy, dia mety hampiasa ny mombamomba anao manokana izahay hanombanana ny fangatahana, hamaliana ny fanontaniana, famerenana ny fahazoan-dàlana, ny references amin'ny fifandraisana, ny fanaraha-maso ny fiaviana sy ny famerenana fiarovana hafa, ary raha tsy izany mampiasa ny mombamomba anao manokana ho an'ny HR sy ny tanjona mifandraika amin'ny asa.
Manaraka ny Lalàna sy ny Fitsipika. Hampiasa ny mombamomba anao izahay araka izay inoanay fa ilaina na mety amin'ny fanarahana ny lalàna manan-kery, ny fangatahana ara-dalàna, ary ny dingana ara-dalàna, toy ny famaliana antso an-tariby na fangatahana avy amin'ny manampahefana ao amin'ny governemanta.
Ho an'ny fanarahan-dalàna, fisorohana ny hosoka ary fiarovana. Azonay atao ny mampiasa ny mombamomba anao manokana ary manambara izany amin'ny mpampihatra lalàna, ny manampahefana ao amin'ny governemanta, ary ny antoko tsy miankina araka izay inoanay fa ilaina na mety amin'ny: (a) fitazonana ny fiarovana, fiarovana ary ny fahamarinan'ny Serivisy, vokatra sy serivisy, orinasa, angon-drakitra ary fananana teknolojia hafa; b) arovy ny zonay, ny anao na ny hafa, ny fiainana manokana, ny fiarovana na ny fananana (ao anatin'izany ny fanaovana sy ny fiarovana ny fitakiana ara-dalàna); (c) manara-maso ny fizotranay anatiny amin'ny fanarahana ny fepetra ara-dalàna sy ny fifanarahana ary ny politika anatiny; d) mampihatra ny fepetra sy fepetra mifehy ny Serivisy; ary (e) misoroka, mamantatra, manadihady ary misoroka ny asa hosoka, manimba, tsy nahazoana alalana, tsy araka ny etika na tsy ara-dalàna, anisan'izany ny fanafihana an-tserasera sy ny halatra maha-izy azy.
Miaraka amin'ny fanekenao. Amin'ny toe-javatra sasany dia mety hangataka manokana aminao ny fanekenao izahay hanangona, hampiasa, na hizara ny mombamomba anao manokana, toy ny rehefa takian'ny lalàna.
Afaka mizara ny mombamomba anao manokana amin'ireo sampan-draharaha sy olona voatanisa etsy ambany izahay na araka ny voalaza amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity na amin'ny fotoana fanangonana.
Orinasa mifandraika. Afaka mizara vaovao voangona momba anao izahay amin'ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondron'orinasay, ao anatin'izany ny mpiara-miasa, ny orinasa mpihazona anay farany, ary ny sampany. Ohatra, hizara ny mombamomba anao manokana amin'ireo orinasa mifandraika aminay izahay mba hanomezana ny vokatray sy ny serivisinay ho anao, izay misy orinasa hafa ao anatin'ny vondronay manao ny ampahany amin'ny tolotra tolotra feno.
Mpanome tolotra. Mizara ny mombamomba ny tena manokana amin'ny antoko fahatelo sy ny olona izay manao asa amin'ny anaranay izahay ary manampy anay amin'ny fitantanana ny orinasanay. Ohatra, ireo mpanome tolotra dia manampy anay hanao fampiantranoana tranokala, serivisy fikojakojana, fitantanana angon-drakitra, famakafakana tranonkala, varotra ary tanjona hafa.
Mpikambana momba ny dokam-barotra. Mety hizara fampahalalana manokana momba anao koa izahay amin'ny antoko fahatelo izay miara-miasa aminay amin'ny fanentanana dokam-barotra, fifaninanana, tolotra manokana na hetsika na hetsika hafa mifandraika amin'ny Serivisy, na manangona fampahalalana momba ny hetsika ataonao amin'ny serivisy sy serivisy an-tserasera hafa. ampio izahay hanao dokam-barotra ny vokatray sy ny serivisinay, ary/na mampiasa ny lisitry ny mpanjifa voasivana izay zarainay amin'izy ireo mba hanaterana doka ho anao sy ireo mpampiasa mitovy aminy amin'ny sehatra misy azy.
Business Transferees. Azonay atao ny manambara ny mombamomba anao manokana voangona momba anao amin'ny antoko fahatelo mifandraika amin'ny fifampiraharahana ara-barotra (na mety ho fifampiraharahana) mifandraika amin'ny fampivondronana, fivarotana ny fizaram-bola na ny fananan'ny orinasa, ny famatsiam-bola, ny fahazoana, ny fanamafisana, ny fandaminana indray, ny famotsorana na ny fandravana ny rehetra na ny ampahany. ny orinasanay (anisan'izany ny momba ny fatiantoka na ny raharaha mitovy amin'izany).
Manampahefana, mpampihatra lalàna, ary ny hafa. Azonay atao koa ny manambara ny vaovao nangonina momba anao amin'ny fampiharana ny lalàna, ny manampahefana ao amin'ny governemanta, ary ny antoko tsy miankina, raha ilaina ny fampahafantarana mba hanarahana ny lalàna na fitsipika manan-kery, ho valin'ny fiantsoana, didim-pitsarana, famotopotoran'ny governemanta, na dingana ara-dalàna hafa, na araka ny inoanay fa ilaina amin'ny tanjona fanarahan-dalàna sy fiarovana voalaza ao amin'ny fizarana mitondra ny lohateny hoe “Fampiasana ny mombamomba ny tena manokana” etsy ambony.
Mpanolotsaina matihanina. Mety hizara ny mombamomba anao amin'ny olona, ​​orinasa, na orinasa matihanina manome toro-hevitra sy toro-hevitra momba ny kaonty, fitantanan-draharaha, lalàna, hetra, ara-bola, fanangonan-trosa, ary raharaha hafa i Sorrento.
FANDROSOANA Iraisam-pirenena momba ny fampahalalana manokana
Ny orinasa Sorrento sasany dia manana foibe any Etazonia, ary manana mpanome tolotra izahay any Etazonia sy any amin'ny firenena hafa. Ny mombamomba anao manokana dia azo angonina, ampiasaina ary tehirizina any Etazonia na any amin'ny toerana hafa ivelan'ny firenenao. Ny lalàna momba ny fiainana manokana any amin'ny toerana ikarakaranay ny mombamomba anao dia mety tsy miaro toy ny lalàna momba ny fiainana manokana ao amin'ny firenenao. Amin'ny alàlan'ny fanomezanao ny mombamomba anao manokana, raha mamela ny lalàna manan-kery ianao, dia manaiky manokana sy mazava tsara amin'izany famindram-pitantanana sy fanodinana izany ary ny fanangonana, ny fampiasana ary ny fampahafantarana voalaza eto na amin'ny fepetran'ny tolotra azo ampiharina.
Ireo mpampiasa Eoropeana dia afaka mijery ny fizarana eto ambany mitondra ny lohateny hoe "Fampandrenesana ho an'ny mpampiasa Eoropeana" raha mila fanazavana fanampiny momba ny famindrana ny mombamomba anao manokana.
Tsy misy fomba fampitana amin'ny Internet, na fomba fitahirizana elektronika, azo antoka tanteraka. Na dia mampiasa ezaka ara-drariny aza izahay mba hiarovana ny mombamomba anao amin'ny loza ateraky ny fidirana na fahazoana tsy nahazoana alalana, dia tsy afaka miantoka ny fiarovana ny mombamomba anao manokana izahay.
SITITRA SY SERVIS HAFA
Ny serivisy dia mety misy rohy mankany amin'ny tranokala hafa sy serivisy an-tserasera tantanan'ny antoko fahatelo. Ireo rohy ireo dia tsy fankatoavana, na fanehoana izay ikambanantsika amin'ny antoko fahatelo. Ho fanampin'izany, ny atiny dia mety ho tafiditra ao amin'ny pejin-tranonkala na serivisy an-tserasera izay tsy mifandray aminay. Tsy mifehy ny tranokalan'ny antoko fahatelo na serivisy an-tserasera izahay, ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fihetsik'izy ireo izahay. Ny tranokala sy serivisy hafa dia manaraka fitsipika samihafa momba ny fanangonana, fampiasana ary fizarana ny mombamomba anao manokana. Mamporisika anao izahay hamaky ny politikan'ny tsiambaratelon'ny tranokala hafa sy serivisy an-tserasera ampiasainao.
Amin'ity fizarana ity dia mamaritra ny zo sy ny safidy azon'ny mpampiasa rehetra izahay.
Mailaka fampiroboroboana. Azonao atao ny miala amin'ny mailaka mifandraika amin'ny varotra amin'ny alàlan'ny fanarahana ny toromarika hialana na tsy hisoratra anarana eo amin'ny faran'ny mailaka, na amin'ny fifandraisana aminay araka ny voalaza etsy ambany. Azonao atao ny manohy mahazo mailaka mifandraika amin'ny serivisy sy mailaka hafa tsy ara-barotra.
Safidy momba ny dokam-barotra. Azonao atao ny mametra ny fampiasana ny mombamomba anao amin'ny dokam-barotra mifototra amin'ny fahalianana amin'ny fanakanana ny cookies avy amin'ny antoko fahatelo ao amin'ny firafitry ny navigateur, amin'ny fampiasana plug-ins/fanitarana navigateur, ary/na fampiasana ny firafitry ny fitaovana finday mba hamerana ny fampiasana ny ID doka mifandraika amin'ny ny findainao. Azonao atao ihany koa ny miala amin'ny dokam-barotra mifototra amin'ny fahalianana avy amin'ireo orinasa mandray anjara amin'ireto fandaharan'asa fialana amin'ny indostria manaraka ireto amin'ny fitsidihana ireo tranonkala mifandray: ny Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), ny European Interactive Digital Advertising Alliance (ho an'ireo mpampiasa Eoropeana - http://www.youronlinechoices.eu/), ary ny Digital Advertising Alliance (optout.aboutads.info). Tsy maintsy apetraka amin'ny fitaovana tsirairay sy/na mpitety tranonkala tianao hampiharana azy ireo safidin'ny fialana voalaza eto. Mariho fa mety hiara-hiasa amin'ny orinasa izay manolotra ny fomba fandaozany manokana na tsy mandray anjara amin'ny fomba fisintonana voalaza etsy ambony ihany koa izahay, ka na dia aorian'ny fialana aza dia mety mbola hahazo cookies sy doka mifototra amin'ny tombontsoa avy amin'ny hafa. orinasa. Raha miala amin'ny dokam-barotra mifototra amin'ny fahalianana ianao dia mbola hahita dokam-barotra amin'ny Internet fa mety tsy dia ilaina loatra aminao.
Aza manenjika. Ny mpitety tranonkala sasany dia azo amboarina handefa famantarana "Aza araho" amin'ny serivisy an-tserasera izay tsidihinao. Tsy mamaly ny “Aza araho” na famantarana mitovitovy amin'izany izahay. Raha te hianatra bebe kokoa momba ny "Aza araho", tsidiho azafady http://www.allaboutdnt.com.
Nandà tsy hanome vaovao. Mila manangona ny mombamomba ny tena manokana izahay mba hanomezana tolotra sasany. Raha tsy manome ny fampahalalana nangatahana ianao dia mety tsy ho afaka hanome ireo tolotra ireo izahay.
FILAZANA HO AN'NY MPIASA EOROPEANA
Ny fampahalalana omena ato amin'ity fizarana ity dia tsy mihatra afa-tsy amin'ny olona ao amin'ny Vondrona Eoropeana, ny faritra ara-toekarena eoropeana, ary ny Royaume-Uni (miaraka amin'ny hoe "Eoropa").
Afa-tsy ny voafaritra manokana, ny fanondroana ny "fampahafantarana manokana" ao amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia mitovy amin'ny "angona manokana" fehezin'ny lalàna momba ny fiarovana ny angona Eoropeana.
maso. Raha ilaina, ny mpanara-maso ny mombamomba anao manokana voarakotry ity Politika momba ny fiainana manokana ity ho an'ny tanjon'ny lalàna momba ny fiarovana ny angona Eoropeana dia ny orinasa Sorrento manome ny tranokala na serivisy.
Toby ara-dalàna ho an'ny fanodinana. Ny fototra ara-dalàna amin'ny fanodinanay ny mombamomba anao manokana araka ny voalaza ato amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia miankina amin'ny karazana mombamomba ny tena manokana sy ny toe-javatra manokana iatrehanay izany. Na izany aza, ny fototra ara-dalàna ianteherantsika matetika dia aseho amin'ny tabilao etsy ambany. Miantehitra amin'ny tombontsoanay ara-dalàna izahay ho fototra ara-dalàna raha tsy voafehin'ny fiantraikany eo aminao ireo tombontsoa ireo (raha tsy hoe manana ny fanekenao izahay na ny fikarakaranay dia takiana na avelan'ny lalàna). Raha manana fanontaniana momba ny fototry ny lalàna momba ny fomba fikarakarana ny mombamomba anao manokana ianao dia mifandraisa aminay amin'ny privacy@sorrentotherapeutics.com.
Tanjona fanodinana (araka ny voalaza etsy ambony ao amin'ny fizarana "Fampiasana ny mombamomba manokana") Basis Legal
Hanome serivisy Ilaina ny fanodinana mba hanatanterahana ny fifanarahana mifehy ny fampandehanana ny Serivisy, na handraisana fepetra izay angatahinao alohan'ny handraisanao ny serivisy. Raha tsy afaka manodina ny angon-drakitrao manokana izahay araka izay takiana amin'ny fampandehanana ny Serivisy noho ny filàna fifanekena, dia miantoka ny mombamomba anao manokana ho an'io tanjona io izahay mifototra amin'ny fahaliananay ara-dalàna amin'ny fanomezana anao ny vokatra na serivisy idiranao sy angatahinao.
Fikarohana sy fampandrosoana Ny fanodinana dia mifototra amin'ny tombontsoantsika ara-dalàna amin'ny fanaovana fikarohana sy fampandrosoana araka ny voalaza ato amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity.
Ny varotra mivantana Ny fikarakarana dia mifototra amin'ny fanekenao izay takian'ny lalàna manan-kery io fanekena io. Raha toa ka tsy takian'ny lalàna manan-kery izany fanekena izany, dia karakarainay ny mombamomba anao manokana ho an'ireo tanjona ireo mifototra amin'ny tombontsoanay ara-dalàna amin'ny fampiroboroboana ny orinasanay sy ny fanehoana anao votoaty mifanaraka amin'izany.
Dokam-barotra mifototra amin'ny fahalianana Ny fikarakarana dia mifototra amin'ny fanekenao izay itakian'ny lalàna manan-kery izany fanekena izany. Raha miantehitra amin'ny fanekenao ianao dia manana zo hanaisotra izany amin'ny fotoana rehetra amin'ny fomba voalaza rehefa manaiky ianao na ao amin'ny serivisy.
Mba hikarakarana ny fangatahana Ny fanodinana dia mifototra amin'ny tombontsoantsika ara-dalàna amin'ny fanaovana fikarohana sy fampandrosoana araka ny voalaza ato amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity.
Manaraka ny Lalàna sy ny Fitsipika Ilaina ny fikarakarana mba hanarahana ny adidintsika ara-dalàna na mifototra amin'ny tombontsoantsika ara-dalàna amin'ny fandraisana mpiasa sy ny fandraisana mpiasa. Amin'ny toe-javatra sasany, mety miankina amin'ny fanekenao ihany koa ny fanodinana. Raha miantehitra amin'ny fanekenao ianao dia manana zo hanaisotra izany amin'ny fotoana rehetra amin'ny fomba voalaza rehefa manaiky ianao na ao amin'ny serivisy.
Ho an'ny fanarahan-dalàna, fisorohana ny hosoka ary fiarovana Ilaina ny fanodinana mba hanarahana ny adidintsika ara-dalàna na mifototra amin'ny tombontsoantsika ara-dalàna amin'ny fiarovana ny zon'ny tenantsika, ny fiainana manokana, ny fiarovana, na ny fananantsika.
Miaraka amin'ny fanekenao Ny fikarakarana dia mifototra amin'ny fanekenao. Raha miantehitra amin'ny fanekenao ianao dia manana zo hanaisotra izany amin'ny fotoana rehetra amin'ny fomba voalaza rehefa manaiky ianao na ao amin'ny serivisy.
Ampiasao amin'ny tanjona vaovao. Mety hampiasa ny mombamomba anao manokana izahay noho ny antony tsy voalaza ato amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity izay avelan'ny lalàna ary mifanaraka amin'ny tanjona nanangonanay azy ny antony. Raha mila mampiasa ny mombamomba anao manokana izahay amin'ny tanjona tsy misy ifandraisany, dia hampandre anao izahay ary hanazava ny fototra ara-dalàna azo ampiharina.
fihazonana. Hotazoninay ny angon-drakitrao manokana mandritra ny fotoana ilaina hanatanterahana ny tanjon'ny fanangonana, ao anatin'izany ny fanomezana fahafaham-po ny fepetra takian'ny lalàna, ny kaonty, na ny fitateram-baovao, mba hametrahana sy hiarovana ny fitakiana ara-dalàna, ho an'ny tanjona fisorohana ny hosoka, na raha mbola ilaina. hanefa ny adidintsika ara-dalàna.
Mba hamaritana ny fe-potoana fitazonana sahaza ho an'ny mombamomba anao manokana, dia diniho ny habetsaky, ny toetra ary ny fahatsapan'ny mombamomba anao manokana, ny mety ho loza mety hitranga amin'ny fampiasana tsy nahazoana alalana na fampahafantarana ny mombamomba anao manokana, ny tanjon'ny fanodinana ny mombamomba anao manokana ary na afaka manatratra ireo tanjona ireo isika amin'ny alalan'ny fomba hafa, sy ny fepetra takian'ny lalàna.
Ny zonao. Ny lalàna eoropeana momba ny fiarovana ny angona dia manome anao zo sasany momba ny mombamomba anao. Azonao atao ny mangataka anay hanao ireto hetsika manaraka ireto mifandraika amin'ny mombamomba anao manokana izay tazoninay:
Access. Manome anao fampahalalana momba ny fanodinanay ny mombamomba anao manokana ary manome anao fahafahana miditra amin'ny mombamomba anao.
correct. Havaozy na ahitsio ny tsy mety amin'ny mombamomba anao manokana.
Fafao. Fafao ny mombamomba anao manokana.
Transfer. Mamindra dika mitovy amin'ny mombamomba anao manokana na amin'ny antoko fahatelo tianao.
mametra. Fepetra ny fanodinana ny mombamomba anao manokana.
zavatra. Manohitra ny fiankinanay amin'ny tombontsoanay ara-dalàna ho fototry ny fanodinanay ny mombamomba anao manokana izay misy fiantraikany amin'ny zonao.
Azonao atao ny mametraka ireo fangatahana ireo amin'ny alàlan'ny fifandraisana aminay amin'ny privacy@sorrentotherapeutics.com na amin'ny adiresy mailaka voatanisa etsy ambany. Mety hangataka fampahalalana manokana aminao izahay mba hanampiana anay hanamarina ny maha-izy anao sy hikarakarana ny fangatahanao. Mety mitaky na mamela anay handà ny fangatahanao ny lalàna manan-kery. Raha mandà ny fangatahanao izahay, dia holazainay aminao ny antony, arakaraka ny fameperana ara-dalàna. Raha te hametraka fitarainana momba ny fampiasanay ny mombamomba anao manokana ianao na ny valinteninay amin'ny fangatahanao momba ny mombamomba anao dia azonao atao ny mifandray aminay na mandefa fitarainana any amin'ny mpandrindra ny fiarovana ny angona eo amin'ny fari-piadidianao. Azonao atao ny mahita ny mpandrindra fiarovana ny data anao Eto.
Famindrana angona miampita sisintany. Raha mamindra ny mombamomba anao any amin'ny firenena ivelan'i Eoropa izahay ka takianay ny hampiharana fiarovana fanampiny amin'ny mombamomba anao araka ny lalàna momba ny fiarovana ny angona Eoropeana, dia hanao izany izahay. Mifandraisa aminay azafady mba hahazoana fampahalalana fanampiny momba ny famindrana toy izany na ny fiarovana manokana ampiharina.
FIVAROTANA NY Etazonia
Raha manana fanontaniana na ahiahy momba ny Politika momba ny fiainana manokana na olana hafa momba ny fiainana manokana na fiarovana ianao dia alefaso mailaka izahay amin'ny privacy@sorrentotherapeutics.com na manorata aminay amin'ny adiresy etsy ambany: Sorrento Therapeutics, Inc.